Ama-Semalt Amaphuzu Okubalulekile Okucatshangelwayo Ekuthuthukiseni I-SEO Strategy
Injini Yokusesha Injini (SEO) ibalulekile emigomweni yokumaketha.Isu le-SEO lihlose ukuthuthukiswa kwamakhasimende ngeziteshi ezihlukahlukene. Kuyindlela yokudayisa yanamuhla esebenzisa inthanethiamapulatifomu ukuheha nokugcina amakhasimende. I-SEO yandisa ukubonakala kwenkampani / brand ngokuyibeka phezulu ngenjini yokuseshaimiphumela.
I-SEO ayiyona isisombululo esiphezulu kodwa inqubo enamandla ngokushesha uma ihlobeneekuphatheni kwamakhasimende kanye nokushintsha amakhono kwezobuchwepheshe belwazi - commercial appraisers. Amabhizinisi ahlose ukuveza amandla awo okugcwele kufaneleukwamukela ukuqapha nokulandela ngokulandelana okuqhubekayo ngaphezu kokusebenzisa isu le-SEO.
Umphathi wePhasimende Impumelelo Semalt ,UJack Miller uchaza izinto ezibalulekile okufanele uzicabangele uma uhlela, uqalise futhi uhlola isu le-SEO.
1. Ukuqonda iMakethe Ebhekelekile
I-SEO ikunika izinzuzo eziningi kunokuba nje uthuthukise amakhasimende. Itkwenza ibhizinisi lithole ukunakwa kwamaklayenti angenzeka. Ochwepheshe be-SEO kufanele baqonde izici zabantuizilaleli ezihlosiwe. I-Google Analytics iyithuluzi elibalulekile le-intanethi elingasiza ama-SEO ochwepheshe ukukhomba izici eziyinhloko ezifunayoamakhasimende.
2. Ukusebenza kwamakethe wamakhilomitha
Inani labantu abathengi ngamafoni smart liyandangokushesha. Kuye kwafinyelela inani labantu amakhasimende abasebenzisa i-desktop ne-laptop computer. Abantu abaningi bangena kwi-intanethi nakwezenhlaloimidiya ngefoni. Uchwepheshe we-SEO kufanele aqinisekise ukuthi iwebhusayithi yenkampani ingafinyeleleka kalula nge-smart phone. I-GoogleI-Mobile-Ukuhlolwa Okungokwenyama kunikeza ukucacisa okuphumelelayo kwekhwalithi yokufinyelela kuwebhusayithi kumakhalekhukhwini.
3. Ukwandiswa Kwezinjini Zokusesha
Injini yokucinga ephezulu yiGoogle. Amakhasimende amaningi asebenzisa i-googleukukhuthaza iwebhusayithi. Ukuthuthukiswa kwezobuchwepheshe kuye kwandisa amandla ka-Google ezindaweni zokucubungula ngesivinini, ukucacaulwazi, kanye nevolumu yamawebhusayithi. Ngesikhathi esifanayo, kunezinjini ezahlukene zokusesha emakethe. Isibonelo, i-Yahoo yinto ezenzakalelayoinjini yokusesha ye-Firefox..I-DuckDuckGo enye injini yokusesha eyenza ukuthandwa phakathi kwamakhasimende.
4. Ukusebenzisana komsebenzisi wewebhusayithi
Iwebhusayithi kufanele ibe nokuqukethwe okucacile, okulungiselelwe ku-anindlela efanelekile. Zonke izithombe namavidiyo kufanele zibonakale, zichazwe futhi zixhunywe. Ulwazi olubhaliwe kufanele lube olucacile kanye nolwazi lwegramalungile. Amazwi angukhiye we-SEO kufanele ahambisane nezinqubo zebhizinisi. I-website enobungane-yomsebenzisi kulula ukuhamba, ngakho-ke ukulungisa kwakhoAmakhasi ewebhu nawo ayabalulekile. Qinisekisa ukuthi unama-cross-links aphelele.
5. Ukusebenzisa i-Quality Links
Izixhumanisi ezisuka kumasayithi afakwe ku-intanethi, okuholela ekhasini lakhoukhiqize ngaphezulu kwezimoto zokudlulisela. Ngakho-ke, iwebhusayithi ye-nkampani, ithola abasebenzisi abaningi kusuka kumasayithi ahlosiwe e-intanethi. I-traffic yokudlulisela okuhleithuthukisa ukuvezwa kwemikhiqizo yebhizinisi kanye nenani lamakhasimende atholakalayo. Ngakolunye uhlangothi, izixhumanisi ezivinjelwe nge-injini yokuseshaamawebhusayithi anganciphisa isimo sekhasi lakho. Ngakho qaphela imithombo yezixhumanisi ezingenayo futhi ukhethe amasayithi afanele ukuqondisa okuphumayoizixhumanisi kuya.
6. I-Power of Social Media
Amapulatifomu ezokuxhumana nabantu anikezela ububanzi obunamandlaamathuluzi wokuthengisa digital. Abasebenzisi baya kwiwebhusayithi ngokusebenzisa izixhumanisi ezinikezwe kuphrofayela yezokuxhumana yebhizinisi. Izinkampani kufaneleukuthuthukisa ukubandakanya okufanele emithonjeni yezenhlalakahle ukuze kuthuthukiswe ukushayela nokuqwashisa brand.
7. Ukuqapha nokulandelela
Kubalulekile ukuqonda ukuthi uhlelo lwe-SEO lusebenza kanjani. GoogleIthuluzi lokuhlaziya liyadingeka ekubukezeni ukusebenza kwecebo le-SEO ngokwandisa ivolumu yethrafikhi. Ngalokhu,Ukuqapha okuqhubekayo kokusebenza kwe-website kuzokusiza ukuba ubone izimbangela, okungabangela ukwehla kwezimoto, ngesikhathi esifanelezivela.
Ukuphakama okuphezulu kwekhasi lebhizinisi eliku-intanethi kwandisa ukubonakala kwalokanye nokuhamba kwamakhasimende. Ngaphambi kuka-2015, i-SEO ibandakanye ukwengezwa kwamagama angukhiye kumawebhusayithi ukuqinisekisa ukutholakala okusheshayo ngokuseshaizinjini. Esikhathini samanje sebhizinisi, i-SEO ihlanganiswe futhi kufanele ihlanganiswe kuhlelo lokuthengisa lwe-digital ye-ibhizinisi labachwepheshe be-SEO abanolwazi kanye nochwepheshe bezokukhangisa nge-digital, ongabashada ngezobuchwepheshe Abahlinzeki bezinsizakalo ze-SEO .